Sary sokitra vy amin'ny omby | Famoronana an-tserasera
Ny omby dia hatrizay mifandray akaiky amin'ny firenentsikaNa dia tato ho ato aza dia antony nahatonga ny fifanolanana io dia biby tandindona izay maneho hevitra maro sy adjectives feno hery toy ny fiakarana.
Tomas Vitanovsky dia mitondra antsika io fiainana miavaka io miaraka amin'ny fanentanana sy ny heriny rehetra misaotra ny sary sokitra vita tamin'ny vy vy. Ity sombin-kazo ity ihany izay nentinay indraindray avy amin'ny tanan'ny mpanakanto izay mahita amin'ny fanodinana endrika endrika mety indrindra, zavatra izay mitranga amin'ny ombin'i Vitanovsky.
Mpanakanto efa ampiasainay ny fotoana hanakaiky kokoa ho an'ny sary sokitra biby tena vita tsara sy ny kalitao, na dia ny tena zava-misy aza dia ity ombalahy ity no mandray ny andraikitra lehibe indrindra amin'ity pejy ity sy amin'ity andro ity.
Mamorona azy naharitra Vitanovsky 4 volana, noho ny ampahany betsaka amin'ny fotoana nilana azy hahitana ireo sombin-javatra mety mba hanomezana azy ny endrika marina momba ilay tarehimarika izay miavaka tsara amin'ny maso. Ny iray amin'ireo hatsarany dia ny fananany mekanika famataran'ora ao, ary araka ny filazan'ny mpanakanto mpamorona dia io no asa sarotra indrindra vitany teo amin'ny fiainany.
Un asa tena tsara vita amin'ny scrap izay mampiseho amintsika ny fahafaha-manome omen'ny fanodinana raha manam-paharetana sy fotoana hahitana ireo sombin-javatra ilaina hamoronana hevitra ananan'izy ireo.
Ity omby vita amin'ny vy vy ity dia izao naseho tao amin'ny efitrano fampirantiana Lamborghini any Pangborne, UK. Tsy misy vidiny izao, na dia afaka miditra aminy aza ny asany sisa tranokala manokana.
Aza milavo lefona ary miditra amin'ny tranonkalany raha misy sary sokitra avo lenta hafa, na dia ny omby aza no iray azo antoka fa hisarika ny sainao izany mitovy amin'ny ahy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » The Scrap Bull nataon'i Tomas Vitanovsky
Famolavolana sary famantarana 5 very ny marika